7 adventures nevapambi chaivo. Classics, nhoroondo uye akateedzana. | Zvazvino Zvinyorwa
7 adventures nevapambi chaivo. Classics, nhoroondo uye akateedzana.
Chikamu chitsva chemufirimu saga we Mapurisa eCaribbean uye zvirokwazvo vanopfuura muverengi mumwe kutenderedza pano vane shungu nezvevanhu vake uye zviitiko zvake. Asi Ini ndinobva kuchikoro chekare. ari Yakareba John Sirivheri, zvirinani, uye ndizvozvo chete. Asi kune mamwe akawanda makororo, chaiwo uye ekunyepedzera, uye izvo zvakanyorwa nezvazvo ndizvo zvisingaverengeki.
Saka ini ndinosarudza izvi 7 nyaya kubva nezuro, nhasi nekusingaperi. Iwo akati wandei echinyakare kubva Sabatini, Salgari naDefoe, rondedzero kwete inoverengeka pamusoro paCaptain Kidd, na Richard Zacks. Yekutanga Nobel novel Steinbeck. Uye matatu matatu matatu: ayo e Vazquez-Figueroa uye izvo zve James L. Nelson.
1 Kaputeni Ropa - Rafael Sabatini
2 Kutarisa - James L. Nelson
3 Rakazara nhoroondo yemakororo uye kuuraya kwevakapamba vanozivikanwa - Daniel Defoe
5 Mapurisa - Alberto Vázquez-Figueroa
6 Iyo Pirate Hunter - Richard Zacks
7 Mukombe weGoridhe - John Steinbeck
Kaputeni Ropa - Rafael Sabatini
Imwe yei makuru echinyakare kubva kuNautical uye pirate adventure enganonyorwa. Kutenda zvakanyanya kune yakafanana firimu rekare rinotungamirwa na Michael Curtiz muna 1935, panenge Erroll Flynn naOlivia de Havilland chisingakanganwiki.
Peter ropa, chiremba muzana remakore regumi nemanomwe England, ndiye kupomerwa kuve chikamu che conspiracy vachipesana naJacobo II uye vanobatwa uye vanotumirwa zvisirizvo kuminda yeBarbada. Ikoko Ropa neshamwari dzake vanoba chikepe cheSpanish uye vanova vapambi vanokurumidza kuwana rombo rakanaka uye mukurumbira.
Murindi - James L. Nelson
Iri zita rekutanga trilogy yakagadzirwa ne Muranda y Hukama hwegungwa. Iyo ine protagonist Thomas marlowe, uyo, aityiwa achiri mudiki semupirati, ava mubatsiri wehurumende yeVirginia mukuchengetedza madunhu ayo. Akagadzwa kuve kaputeni wePlymouth Prize, chikepe chikuru chekoloni, kuti azvidzivirire kuhama dzeMahombekombe, boka revapambi rinotungamirwa naJean-Pierre LeRois, wekare uye ane utsinye kwazvo waanoziva Marlowe.
Uyu munyori wekuNorth America akafungidzirwa mugari wenhaka kumatayera uye matauriro de Patrick O'Brian.
Rakazara nhoroondo yekuba uye kuuraya kwevakakurumbira vapambi - Daniel Defoe
Iri zita rinofungidzirwa main uye akanakisa akanyorwa sosi zvese zvevadzidzi veNhoroondo yePiracy uye yevanyori vakapa iyo toni yerudo ngano kuvapambi.
La chikamu chimwe rakaburitswa muna 1724 pasi pseudonym ye Kaputeni Charles Johnson. Asi kumashure kwake aive akahwanda, sekudzidziswa kwayakaitwa gare gare, Daniel Defoe. Mwanakomana 17 nhoroondo yeanozivikanwa echirungu vapambi venguva (Avery, Mary Verenga, Nhema…), Inoperekedzwa nezvakawanda zvirevo nezvehupambi, njodzi dzayo kumarudzi, zvikonzero zvacho pamwe nekugadzirisa. Chikamu chechipiri chinoshanda nevatungamiriri nevashandi vanoshanda muMadagascar, gungwa reAfrica uye Indian Ocean.
Sandokán ndiye protagonist we adventure nhaurwa dzakateedzana yakanyorwa nemunyori weItari Emilio Salgari. Uye mukuru pane vese, seni, zvirokwazvo yeuka iyo 70s tv akateedzana imomo vana vese vaida kuve iyi shingi pirate yekuMalaysia. Kana iyo Pearl yeLabuán, musikana wake. Vakandipa iro bhuku randinochengeta segoridhe pamucheka.
Sandokan ndeye muchinda we borneo kuti akapika kutsiva kumaBritish, akamutorera chigaro chake ndokuuraya mhuri yake. Ndokusaka iye akazvipira kune utsotsi pamwe nezita remadunhurirwa rekuti Malaysian tiger. Ane vashandi uye shamwari dzisingabvumirwe, sePutukezi Yanez, uye hwaro hwavo hwekushanda ndicho chitsuwa che Mompracem.
Uye kubva kuSalgari zvakare imwe pirate, Iyo nhema corsair, iyo yakagadziridzwawo kumabhaisikopo pamwe chete nemutambi airidza Sandokan, Indian Kabir Bedi.
Haikwanise kupotsa chikamu chekumusha nevakakurumbira Jacare jack, Yakagadzirwa naVázquez-Figueroa, inofananidzwa neakakura mafambiro. Iyi nhoroondo inotaurira nyaya izere nezviito, manzwiro uye kunyengera, ichitarisa izvi Wekare weBritish akazvimiririra uye mudiki kwazvo pearl muvhimi Sipanish, Sebastián Heredia. Ndiwo wekutanga musoro weiyo trilogy inoenderera ne Negreros y Leon Bocanegra.
Muvhimi wepirate - Richard Zacks
Zvimwe a bhuku renhoroondo kupfuura inoverengeka, iri bhuku disassemble the legend kuti Captain William Kidd aive pirate uye buccaneer ane mumvuri mukurumbira. Zacks inotiratidza izvo, muchokwadi, Kidd aive mercenary mukushandira kweChirungu Crown, yakapihwa basa rekutora vapambi nekuvamanikidza kuti vadzosere hupfumi hwavo hwakabiwa.. Inotarisa zvakanyanya pane duel iyo, panguva yese yebasa rake, Kidd aive neakakurumbira pirate, Robert Culliford. Zvimwechetezvo, zvinehunyanzvi kugadzirisa zvakare zvematongerwo enyika nehupenyu hwemagariro, zvese panyika nepagungwa, zvezana regumi nenomwe zana.
Mukombe wegoridhe - John Steinbeck
Henry Morgan ndeimwe ye vane mukurumbira uye vanopokana vevapambi vehumambo yakabuda panguva apo hupombwe hwaive chiitiko chepamutemo uye chekuda nyika icho chaive chikamu chehondo pakati peSpain neEngland. Akasarudzika Admiral nema buccaneers muna 1666, akatungamira nzendo yakaparadza Port-au-Prince naPorto Bello.
Mubayiro weNobel John steinbeck inotarisa pane iyi nyaya mu kukunda kwePanama (Mukombe weGoridhe), uyo Morgan akabva pamudyandigere nezvakawanda zvakapambwa. Yakabudiswa muna 1929, yaive bhuku rake rekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 7 adventures nevapambi chaivo. Classics, nhoroondo uye akateedzana.
Makore zana kubva pakazvarwa John F. Kennedy uye mabhuku manomwe pamusoro pehunhu hwake.